Mihorohoro ny vahiny : matahotra pesta avokoa ny mpizahatany | NewsMada
Mihorohoro ny vahiny : matahotra pesta avokoa ny mpizahatany
Manoatra no ho ny tany misy hotakotaka. Raiki-tahotra avokoa ny vahiny any ivelany mikasika ny valanaretina aty Madagasikara. Miparitaka any anaty tambajotran-tseratsera ny vaovao, indrindra taorian’ny nahafatesan’ilay mpanazatra basikety seiseloà, vokatry ny pesta, ny herinandro lasa teo.
Mihazakazaka ny raharaha. Miantraika any amin’ny tontolon’ny fizahantany sahady ny valanaretina pesta miparitaka eto Madagasikara. Manafaingana ny fielezan’ny vaovao rahateo ny teknolojian’ny fifandraisana, indrindra ny tambajotra sosialy sy ny “internet”. Nambaran’ny mpandraharaha amin’ny fizahantany iray taminay, manana mpanjifa avy any Alemaina sy Soisa, fa marobe tokoa ireo mpanjifany nangataka vaovao tamin’izy ireo. Hany azonay natao, nanome hery sy nanome antoka azy ireo fa tsy tokony hisy fiantraikany any amin’ny vahiny mpizahatany aloha, hatreto, ity pesta ity.
Tsy mijanona ela eto Antananarivo sy Toamasina
Manampy izany, efa nandray fepetra amin’ny fiarovana tsy ho voan’ny aretina, ny fitandroana ny fahadiovana, ny fanaraha-maso ny fotodrafitrasa handraisana ny vahiny, ity orinasa mpikarakara mpizahatany ity. Manampy izany, novaina ny dia sasany andehanan’ny vahiny. “Tsy tazonina ela eto Antananarivo sy any Toamasina an-tanàn-dehibe, fa nafindra any amin’ny toeran-kafa sy be natiora kokoa”, hoy ihany izy.
Hiantraika mafy any amin’ny tontolon’ny fizahantany sy ny endrik’i Madagasikara ity trangana pesta hita aty amin’ny taonarivo fahatelo ity, sady henatra ho antsika sy ny mpitondra.